ASJA-ASCOJA-MAJA International Symposium on Disaster Risk Reduction 2017 was concluded successfully; MAJA Announcement (1): Forms for November TOP-J 2017 Exam are accepted at MAJA Office by 3rd November 2017 at the latest. For more information, click on CURRENT tab of the web page. (2) Coming out Top J online result held on 24th September 2017
ASJA-ASCOJA-MAJA International Symposium on Disaster Risk Reduction 2017
2017 ခုနှစ် 10လပိုင်း 7ရက်နေ့ MELIÃ Hotel တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ASJA-ASCOJA-MAJA International Symposium on Disaster Risk Reduction 2017 ပွဲကြီးအား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံ အသီးသီးမှ ဧည့်သည်တော်များ ၊ ကြွရောက် ချီးမြှင့် ပေးကြပါသော ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါသော အဖွဲ့အစည်း များမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား လုံးကို MAJA မှ အထူးလှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
TOP-J 2017 Exam (November)လ အတွက် Form လက်ခံခြင်း
ယခုအကြိမ်တွင် Basic (N4,N5) Level , Inter (N3,N2) Level နှင့် Advance (N1) Level များကို ကျင်းပသွားပါမည်။
Basic Level အတွက် စာမေးပွဲဖြေရမည့် နေ့ မှာ 11.11.2017(Saturday) ဖြစ်ပြီး Yangon University of Foreign Languages (YUFL) တွင်ဖြေဆိုရပါမည်။
Inter နှင့် Advance Level အတွက် စာမေးပွဲဖြေရမည့် နေ့ မှာ 12.11.2017(Sunday) ဖြစ်ပြီး MAJA တွင်ဖြေဆိုရပါမည်။
Exam fee - $20 (only USD)
စာမေးပွဲ Form များကို 3.11.2017 ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလက်ခံပေးသွားပါမည်။
ရုံးချိန်​ 9:30 မှ 4:30 အထိ(တနင်္လာ မှ ​သောကြာ​နေ့)
ထမင်းစားချိန်​ 12 နာရီ မှ 1 နာရီ အထိ ရုံး​ခေတ္တပိတ်​ပါသည်​။
အခန်း အမှတ် ၇၀၇၊ ၇လွှာ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊တိုက် (C)၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
Top J online result ထွက်ရှိခြင်း
(24.9.2017) ရက်နေ့တွင် ဖြေဆိုထားသော Top J online result များထွက်ပါပြီရှင်
အောက်ပါ link အတိုင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။
ခုံနံပါတ်နှင် မွေးသက္ကရာဇ် ရိုက်ထည့်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
A, B, C သုံးခုထဲမှ တစ်ခုခုပါရင် အောင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ သုံးခုထဲမှာမှ တစ်ခုမှ မပါရင် fail ဖြစ်ပါတယ်။
(1) Semester High School Program in Japan (full scholarship အား) မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့အထိ လျှောက်လွှာလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ (2) (၁၄)ကြိမ်မြောက် ဂျပန်စာပေဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ နှင့် (၄) ကြိမ်မြောက် ဂျပန်ပုံပြင်ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ ၏ ပထမအဆင့်ရွေးချယ်ခံရသူများကြေညာခြင်း။ (3) JLPT 2019 July စာမေးပွဲအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် လျှောက်လွှာတင်ထားသူများ Test Voucher (စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်) ကို ၂၂.၃.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) မှ ၆.၄.၂၀၁၉ (စနေနေ့) အထိလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။;
Room 707, 7th floor,
Building C, Pearl Condo,
Yangon, Myanmar, 11201br
visitors : 30,137